प्रदीप गिरीको निवासमा निधिको दुई घण्टा, सभापतिमा सहयोग गर्ने गिरीको प्रतिबद्धता ! « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १२ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आज पार्टीका नेता तथा चिन्तक प्रदीप गिरीसँग भेटेर आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा आफूले उम्मेद्ववारी दिने बताएका छन् । गिरी निवास भीमसेनगोलामा पुगेर निधिले आफूले सभापतिमा उठ्नेगरि तयारी थालेको पनि जानकारी गराएका थिए । करिब दुई घण्टा लामो भेटवार्तामा नेता गिरीले निधिलाई आफ्नो साथ, सहयोग र समर्थन रहने कुराको विश्वास दिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
निधिले पछिल्लो समय आफूलाई १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेद्ववारी दिने तयारीका साथ व्यस्त राखेका छन् । उनी दैनिकजसो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुसँग भेटवार्तामा छन् । निधिले सभापतिमा आफूलाई सहयोग गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले १४औं महाधिवेशनमा पनि आफूले नै उम्मेद्ववारी दिने तयारी गरेपछि निधि देउवासँग रुष्ट छन् ।
निधिसँगको भेटमा नेता गिरीले सभापति देउवाले अब ‘रिटार्यड’ भएर बस्दा राम्रो हुने विचार राखेका थिए । र, सभापतिमा निधि उठे आफूले पूरा साथ दिने पनि गिरीले वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गिरीले निधि कांग्रेस सभापतिको लागि योग्य उम्मेद्धवार भएको उल्लेख गर्दै सभापति बनाईए पार्टीको लागि पनि राम्रो हुने तर्क गरेका छन् ।
निधिले यसअघि पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि, नेता सिंह र वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँगै निधिले भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरुबीच मिलेर अघि बढ्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको थियो । तीनै जना नेताहरु विपी कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि र गणेशमान सिंहका छोराहरु भएकोले पनि अबको नेतृत्व आफूहरुमध्ये एक जनाले गर्नुपर्ने उनीहरुबीच सहमति बनेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक,कार्तिक ८ । बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ५ चण्डेश्वरीस्थित चण्डेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्ने मूलद्वारमा नै